တရုတ် Trailer စက်မှုရပ်ဆိုင်းမှု BPW အမျိုးအစားစက်ရုံနှင့်ပေးသွင်းသူများ | DaDa
သုံးပါ: Trailer အစိတ်အပိုင်းများ
အစိတ်အပိုင်းများ: Trailer ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထား
မက်စ် payload: ရိုးနှုန်း 16 တန်ချိန်
မူလအစရာ: ရှန်ဒေါင်း, တရုတ်, ရှန်ဒေါင်း, တရုတ်
မော်ဒယ်အရေအတွက်: RTD-BPW1360-2, RTD-BPW1360-3
ကျနော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်သင်သည်အခြားလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ပြီဒါကြောင့်လုံခြုံရေးအတွက်အဖြစ်နှင့်ကာကွယ်ရေး dust.If, သင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီစိတ်ကြိုက်နိုငျသညျ, ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကြိုးနှင့်အတူက secure နှင့်လမ်းပိုင်းရုပ်ရှင်အတူကခြုံ, အ pallet အပေါ်ထုတ်ကုန် pallet packing.Place ကိုအသုံးပြုပါ။
အချိန်ဦးဆောင်လမ်းပြ: 30 ရက်အတွင်း
အဘယ်ကြောင့်ပိုလေးယာဉ်များအဘို့အ Do ကျနော်တို့အသုံးပြုမှုရွက် Springs?
တစ်ဦးကအရွက်နွေဦး, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးရထားနွေဦး, များသောအားဖြင့်ဘီးတပ်ယာဉ်အသုံးပြုသွားမည်နွေဦး၏ရိုးရှင်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သူကအလယ်ခေတ်ကာလ၌ပေါက်၏ရှေးအကျဆုံးအမြိုးမြိုးတစျခုဖွစျသညျ။ တဦးတည်း helical ဖြစ်သောပုံမှန်နွေဦး, ကျော်တစ်ဦးရွက်နွေဦး၏အားသာချက်များကိုအရွက်နွေဦးရဲ့အဆုံးတိကျတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင်ညွှန်ကြားထားခြင်းကိုခံရအံ့သောငှါဖြစ်၏။ လေးလံမော်တော်ယာဉ်များအဘို့အရွက်စမ်း frame ကိုမှ fixed နိုင်ပါတယ်, သို့မဟုတ်ပါကပုံမှန်အားဖြင့်သေးငယ်တဲ့ Swing လက်မောင်းသောချည်, မှတဆင့်ချိန်း frontage နှင့်အတူတိုက်ရိုက်တဦးတည်းအဆုံးမှာ fixed နိုင်ပါသည်။ compressed လျှင်ချည်နှောင်ရှည်မှအရွက်နွေဦး၏အကွံတက်ကြာပါသည်။ ဒါဟာပျော့ပျောင်း springiness ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
သင်တို့သည်ဤရပ်ဆိုင်းမှုအစိတ်အပိုင်းများကိုသန့်ရှင်းရေးနေချိန်တွင်, ဒီကိုလည်းစစ်ဆေးကြပြီးအစားထိုးခံရဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကြည့်ရှုရန်ကောင်းသောအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးချင်းစီနွေဦးမှာတစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်လိုက်ပါကအောက်ပါဆိုင်းဘုတ်များဖေါ်ပြခြင်းရဲ့လျှင်ကြည့်ပါ:
တခြားသူတွေထက်သိသိသာသာမြှောက်ရဲ့တစ်ဦးကအရွက်နွေဦး - သင့်ယာဉ်ကိုဖြစ်စေဘယ်ဖက်သို့မဟုတ်ညာဖက်ခြမ်းမှတစ်ဦးသိသာ tilt ရှိပါတယ်သောဤများသောအားဖြင့်နည်းလမ်း။ အဆိုပါ SAG သိသာသည်သို့မဟုတ်အလွန်သိသာသည်ဆိုပါက, အမြန်ဆုံးအဖြစ်ဝတ်ဆင်ထွက်အရွက်နွေဦးအစားထိုးလိုက်ပါ။
ပြိုကွဲနွေဦး - သငျဟောင်းတဦးတည်းဤနိမိတ်လက္ခဏာဖေါ်ပြခြင်းလျှင်အသစ်တစ်ခုကိုနွေဦးရရန်ရှိသည်ဒါကြောင့် Cracked သို့မဟုတ်အရိုးကျိုး, welded မရနိုင်ပါ။
ပြင်းထန်စွာ corroded ဟာ့ဒ်ဝဲ - တစ်ဦးချင်းစီနွေဦးကိုဆက်သွယ်ထားသောကြိုးတံသင်, အခွံမာသီးများနှင့်ဦး-သော့ခလောက်သံချေးကနေအခမဲ့ဖြစ်သင့်သည်။ ဤအစိတျအပိုငျးပြင်းထန်ချေးဖေါ်ပြခြင်းနေတယ်ဆိုရင်, ကသစ်ကိုစမ်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အချိန်ပါပဲ။
ယခုတွင်သင်သည်ပြင်းထန်စွာပျက်စီးသွားသောစမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကို restore လုပ်ဖို့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစေခြင်းငှါ။ task ကိုအလွန်ခက်ခဲသည်အချိန်ကုန်, နှင့်အထူးပစ္စည်းကိရိယာလိုအပ်ပါတယ်ကတည်းကသို့သော်ဤကယ့်ကိုအကြံပြုလိုတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးလောင်းတဲ့ professional စက်ပြင်လက်ကိုင်အလွန်အမင်းထွက်-ဝတ်ဆင်သို့မဟုတ်စမ်းပျက်စီးစေပါလိမ့်မယ်။
ယခင်: BPW, FUWA အမျိုးအစားအဘို့အ semi နောက်တွဲယာဉ်အရွက်စမ်း
Z-အမျိုးအစား Air ကိုနွေဦး
မိုးသည်းထန်စွာတာဝန်ထရပ်ကား BPW ရပ်ဆိုင်းမှုများအတွက်အရွက်နွေဦး ...
© Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved. ပူပြင်းတဲ့ထုတ်ကုန်များ - မြေပုံအညွှန်း - amp မိုဘိုင်း Wide Body Car Leaf Spring, Shacman Heavy Truck Parts Front Leaf Spring, Heavy Truck Leaf Spring 52crmnba, Car Leaf Spring,